Sochii Fakkina Barruu
Galtee sochii fakkinaa gara barruu fakkasaa wanta filatamee keessatti dabala.
Choose Format - Object - Text AttributesGraphic - Define Text AttributesText - Text Animation tab
Galteewwan sochii fakkina barruu
Galtee fayyadamuu barbaadde fili, itti aansuudhaan amaloota galtee qindeessi
Galtee sochii fakkina gara barruu fakkasa wanta filatameetti fayyadamuu barbaadde fili. Galtee sochii fakkinaa haquuf Galtee Mitifili.
Barruu mirga irraa gara bitaatti marsa.
Barruu bitaa irraa gara mirgaatti mara.
Gara irra keessaatti
Barruu jala irraa gara irraatti mara.
Barruu gubbaa irraa gara jalatti mara.
Yeroo galteen fayyadame, barruun kun mul'atu fi fakkasa wantaa keessatti argama.
Yeroo bahitiitti barruun ni mul'ata
Erga gateen fayyadameen booda, barruun mul'ateeti tura.
Galteewwan sochii fakkina barruuti
Dirqalaalee marfame galtee sochii fakkinaaf qindeessi.
Galtee sochii fakkinaa fufamaan taphachiisa. Lakkoofsa sa'aatiiwwanii galtee taphachisuuf, sanduuqa filannoo kana haquu fi lakkoofsa sanduuqa Fufamaa keessatti galchi.
Lakkoofsa sa'aatiiwwan galtee sochii fakkinaa irra deebi'uuf barbaaddee galchi
Gatii dabalataa barruu maraadhaaf ifteessi.
Gatii dabalataa pikseeliiwwan keessaa safara .
Lakkoofsa dabalataawwaanii kan barruu marsuu galchi.
Galtee irra deebi'uun dura tuursiisuuf hanga sa'aatii murteessi.
LibreOffice'n ofuuman hanga sa'aatii galtee irra deebiin dura tursiisuuf adda baasa. Yeroo turtii hujeekaan ramaduuf saduuqa fillannoo kana haqi. Itti aansuudhaan gatii sanduuqaa Ofumaankeessatti galchi.
Irra deebi'uu galtee duraa tursiisuuf, hanga sa'aatii galchitee irra deebiin duraa tursiisuuf galchi.
Title is: Sochii Fakkina Barruu